26 / 11 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Noofambar 26, 2018
Zonguldak-Karabuk Tababar ku saabsan shixnadda kalluunka
Zonguldak - Filyos yoğunlukKarabük tareenka wuxuu isu beddelayaa dhibaato. Safarrada Filyos-Zonguldak, gaar ahaan aroortii, muwaadiniinta xirxiray safarradii kalluunka, safarradii agoonta ahaa ee lagu gaari lahaa khadka taleefanka ee halkinsesi ee WhatsApp. Muwaadin, si isdaba joog ah [More ...]
TCDD waxay sharraxeysaa shil tareen ee magaalada Sivas
Agaasinka guud ee TCDD, shilka tareenka ee Sivas, Saldhigga Bostankaya inta lagu gudajiro tareenka adeegga, Divriği-Sivas tareenka rakaabka ah ee la raaco oo ka dhashay shil ka dhacay albaabka xarunta, rakaabka 8 ayaa waxyar ka dhaawacmay, adeegga shilalka. [More ...]
Waqtiga xorta ah ee bilaashka ah ee kuyaala basaska ee Sakarya
Basaska Dawlada Hoose ee Sakarya waxay bilaabeen xilliyada internetka. Fatih Pistil, gaadiidka dadweynaha wuxuu sii wadayaa inuu qaado tillaabooyin kor loogu qaadayo heerarka, ayuu yiri. Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya ayaa soo bandhigtay codsi cusub oo ku saabsan gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Rabitaanka Cabsida wuxuu ku dhamaanayaa Saruhanli
Dowlada hoose ee Manisa waxay qabataa shaqo dayactir iyo balaarin balaaran oo lagu sameynayo jidka u dhexeeya Hatıplar iyo Şatırlar Neighborhood degmada Saruhanlı. Riyo cabsi leh darawalada kadib shaqadii laga qabtay wadada hada ay shilalka soo noqnoqda dhacaan [More ...]
Maareeyaha Guud ee shirkadda 'Mota' Guud ahaan dadaalkeenna oo dhan waa in aan fududeyno nolosha dadka oo aan gacan ka geysanno adduunyo dheeri ah oo la heli karo eğitim Tababbarka ayaa loo bilaabay ujeeddada lagu qabanayo gaadiidka dadweynaha ee magaalada oo ay leeyihiin dad aqoon iyo aqoon u leh. [More ...]
Diiwaanka Asphalt ee Caasimadda Trabzon
Dowlada Hoose ee Trabzon ayaa furaysa xilli roobaadka sanadka ee 2018-350 iyada oo hadafku yahay in la dhigo kun tan oo ah raashiinka jidadka xaafadaha. [More ...]
Diyaargarowga Jiilaalka ee Jidadka Tareenka
67 898 kun oo kilomitir oo network wadada Turkiga General Directorate of Waddooyinka Karl Argagixisada Center furay camera deg dega ah iyo waxaa la socda maalmood saacad 7 24 la nidaamka macluumaadka. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit [More ...]
Samsun Yeşilyurt Harbour, 12. Gaadiidka Logitans Transport ayaa ku biiray Suuqa Soodhiga
Bandhigga Gaadiidka iyo Saadka, ee mid ka mid ah qodobbada shirarka ee waaxda saadka, ayaa lagu qabtay Xoolka Bandhigga 14-16 November 2018. Mid ka mid ah ugu xarumo muhiim ah dekedda Turkiga ee qalabka casriga ah iyo qalab [More ...]
Tareenka Tareenka iyo Tareenka xamuulka ah ee Sivas Head ayaa ku dhacay 8 Injured
Tareenka rakaabka ee u dhawaa magaalada Ulas ee Sivas, ayaa dadka 8 ay ku dhaawacmeen ka dib markii ay isku dhaceen tareenka xamuulka qaada. Shilka waqtiga 11.00 Divriği degmada Sivas ee jihada TCDD Transportation Inc. [More ...]
Chiğ Köfteli oo ku taal Frankfurt Tram, Turkül Gezi
Waxaa soo qabanqaabiyey Ururka Dhaqanka Frankfurt Gaziantep ee 'Raw Meatball Party' xafladda Tram ', qunsulka guud ee Frankfurt Burak Kararti iyo muwaadiniin badan oo Turki ah ayaa ka soo qeybgalay. Waxaa abaabulay Ururka Dhaqanka ee Frankfurt Gaziantep [More ...]
RayHaber 26.11.2018 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 26.11.2018 ee nidaamkayaga.
2019 Metro Line oo lagu rakibo 5 ee Istanbul
Si loo baabi'iyo dhibaatada taraafikada ee Istanbul iyo in si fudud loo helo meel kasta, maalgashiga metro wuxuu ku socdaa xawaare buuxa. 2019, xariiqda metro ee '5 metro' ayaa loo qorsheeyay in la furo. Sida qorshuhu yahay; Dudullu - [More ...]
SAMULAŞ waxay jabisaa Diiwangelinta tirada rakaabka
Jimcihii Samsun, taraamyada, gawaarida ringbuur iyo tareennada SAMULAŞ iyo jimicsiyo basaska la raaco waxay jabiyeen rikoor tirada rakaabkii ay wateen. Gawaarida bixinaya adeegyada xadiidka fudud ee Samsun ku dhawaad ​​9 sano [More ...]
Gawaarida Gawaadhida ah waxaa laga helaa '' E - Kocaeli ''
Gawaarida gawaarida magaalada, jidadka iyo wadooyinka ayaa loo dhigaa si qaldan, carqaladaha taraafikada iyo dhibaatooyin kala duwan ayaa sababay. Kooxaha taraafikada ee ku sugan bartamaha magaalada ee gawaarida qaladka ah ayaa khalad galay, iyagoo gaariga u jiiday goobta baabuurta la dhigto. [More ...]